शिलान्यास भएको ३ बर्ष पछि फेरी सर्भे गर्न रातो कितावमा
धरान / २०७४ भदौं १ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उदयपुरमा हेलिकोप्टर चढेर दुईवटा पुलको तामझामका साथ शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश र संघको निर्वाचन आउने तीन महिना अघिको कुरा हो । उदयपुरसँगै जोडिएको खोटाङ र भोजपुरको बीचमा पर्ने सुनकोसी नदीमा पुलको शिलान्यास गर्न शेरवहादुरसँगै उदयपुर १ नं. क्षेत्रका सांसद डा. नारायण खड्का र भोजपुरको १ नं. क्षेत्रका सांसद शेरधन राई पनि साथमा थिए । पुल बन्ने हल्ला ०५६ सालदेखिको हो । तर चुनावको मुखमा देउवाले शिलान्यास नै गरि दिए । तीन महिनाको अवधीमा उदयपुर क्षेत्रको रानीटारस्थित पिलरका लागि खाल्डो खन्ने काम भयो । त्यो खाल्डोमा अहिले पानी पानी जमेको छ
प्रकाशित मितिः असार ७, २०७६
प्रदेश १ का अलपत्र पुलहरु
धरान / पूर्वका प्राय पुल आयोजनाहरु सुनसरी मोरङ पुल आयोजनाले हेर्दै आएको थियो । तर सरकारले उक्त आयोजनालाई भङ्ग गरे पछि आयोजनाले हेर्दें आएका प्रदेश १ का ३८ वटा पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेका छन् । प्रदेश १ का लिङ्क रोडहरुको ३८ वटा पुल हेर्दै आएको आयोजनाले गत असारबाट हटेको पुल आयोजना पूर्वी सेक्टर १ धरानका आयोजना प्रमुख कैलाश रौनियारले जानकारी दिए । उनी यस अघि सुनसरी मोरङ डिभिजन मै थिए । निर्माण थालिएका पुलहरु प्राय अलपत्र अवस्थामा रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट निकासा नगर्दा ठेकेदार कम्पनिले काम सुचारु नगरेको रौनियारको भनाई छ । एक बर्षमा ३० प्रतिशत काम सुनसरीको धरान –